Onye na-achọta mgbazinye ụgbọ ala gị - ụgbọ ala gị na nke kacha mma?
Chọrọ ụgbọ ala mgbazinye? I ruola na peeji nke ichoro. Jiri nke anyị ụgbọ ala mgbazinye Finder ma nweta otu na ọnụahịa kacha mma yana nkwa niile enwere ike.
Car mgbazinye engine
N'elu ahịrị ndị a ị ga-ahụ igwe nchọgharị anyị dị ike nke ga - enyere gị aka inweta ọnụahịa kacha mma. Iji ya dị mfe, banye na ebe a na-eburu ya, kaa akara ụbọchị nnabata na ụbọchị ị ga-alaghachi ma ị ga-enyocha ma ị ga-enweta ụgbọ ala mgbazinye kacha mma na mkpịsị aka gị.
1 Car mgbazinye engine
2 Rụọ ụgbọ ala
3 Uru nke ịgbazite ụgbọ ala
4 Rụọ ụgbọ ala n'ịntanetị
4.1 Entalgbọ ala
4.2 mmefu ego
5 Kedu ka igwe nchọgharị n'ịntanetị si arụ ọrụ
6 Enwere m ike ịgbazite ụgbọ ala na-enweghị kaadị akwụmụgwọ?
7 Kedu otu mgbazinye ụgbọ ala n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na-arụ ọrụ?
Otu n'ime nchegbu kachasị na-ebilite mgbe ị na-eme atụmatụ njem anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha buru ibu, bụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị nwere ndị eze Ọ dị mkpa ka ị rụọ ụzọ ụfọdụ mgbagwoju anya ma ọ bụ njem gaa obodo ndị ọzọ.
Ọtụtụ na-agba ọsọ n'iji ụgbọ njem ọha, ma ọ bụ n'ihi enweghị nkasi obi na nnwere onwe na usoro oge, wdg. na nke a pụtara, ma ọ bụ n'ihi mmụba ha na-eweta na mkpokọta ego ma ọ bụ mmefu ego. Agbanyeghị, ịnwe ụgbọ ala anyị anaghị adị mfe mgbe niile, ọ bụ ebe ahụ ka echiche nke ụgbọ ala mgbazinye.
O nwere ike ịbụ na na mbido, ịgbazite ụgbọ ala bụ ọrụ dịtụ mgbagwoju anya, mana ọ nweghị ihe ọzọ. Ọzọ, anyị na-akọwa ma nyere gị aka otu esi eme ya. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ọnụ ala dị ọnụ ala naanị ị pịa ebe a.
Uru nke ịgbazite ụgbọ ala
Ikpebi ịrịọ ụgbọ ala mgbazinye n'oge njem gị nwere ike ịba uru dị ukwuu:
Nnwere onwe nke oge iji megharia.
Mayor nkasi obi.
Mee atụmatụ ụzọ dabere na mkpa gị.
Na-echekwa, ebe ọ bụ na ịgbazite ụgbọ ala, ọ bụrụ na ọ bụghị ụgbọ ala dị elu, nwere ike ịnwe ọnụahịa dị n'etiti € 5 na € 15 kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị ahọrọ ịga njem ọha na eze, ego a ga-aka elu.
Inwe ike ibu a ibu buru ibu.
Rụọ ụgbọ ala n'ịntanetị
Ugbu a, na ntanetị anyị na-ahụ ụlọ ọrụ dịgasị iche iche raara nye mgbazinye ụgbọ ala na-enye anyị ohere nke ịrịọ ọrụ ha kpamkpam n'ịntanetị. Mana ihe anaghị akwụsị ebe a, mana anyị nwere nhọrọ ọzọ dị ka ibe weebụ dị iche iche nke na-enye anyị injin ọchụchọ nke na-eso n'etiti aha dị iche iche raara nye ngalaba a iji gosi anyị ọnụahịa kacha mma.
N'ime ndị a kacha mara amara, anyị nwere:
RentalCars bụ ikpo okwu nke na-enye gị ohere iji tụnyere ndị na-eweta ọrụ mgbazinye ụgbọ ala iji chọta ọnụego dị ọnụ ala. Iji ya dị mfe, naanị ị pịa ebe a, mezue data niile ma ị nwere ike idozi ụgbọ ala mgbazinye gị ugbu a na ọnụahịa kacha mma.
E hiwere Budget na California, karia kpọmkwem na obodo Los Angeles, na 1958. Ọ malitere dị ka obere azụmaahịa ezinụlọ nwere naanị ụgbọ ala mgbazinye 10.
Taa, o nwere otutu ugbo ala, gwongworo na vans, na mgbakwunye na ngụkọta nke Officeslọ ọrụ 3.400 dị na mba 128.
Otu ụlọ ọrụ ọkachamara na mgbazinye ụgbọ ala na Europe nwere ihe karịrị afọ 60 ma nwee ntụkwasị obi nke ihe karịrị nde ndị ahịa isii na 2014. You nwere ike ịchọpụta onyinye ha site na itinye njikọ a.
Six.es bụ ọrụ dị n'ịntanetị nke na-enye mgbazinye ụgbọ ala na Spain na ihe karịrị mba 105 gburugburu ụwa. Ma ugbu a ị nwere ike itinye akwụkwọ na mbelata 10% ekele AbsolutViajes na ịpị ebe a. You ga-atụfu ohere ahụ?
Naa, ebe Ngwa aghọọla ngwa ọrụ dị mkpa iji mee ka ndụ anyị "dị mfe", KAYAK na-ebilite, onye ebumnuche ya bụ inye anyị aka mgbe ị na-eme atụmatụ ezigbo njem anyị. na-atụle ọnụahịa kachasị mma n'etiti ibe weebụ dị iche iche. Ma, n'ezie, ọ na-enyekwa anyị ohere ịchọta ụgbọ ala mgbazinye kachasị mma maka mkpa anyị.
Onye obula nwere ihe ha choro, nke a mere na Avis nyere anyi a nnukwu ugbo ala ụdị dị iche iche: site n'ụgbọala ndị dị mfe na ike na okomoko. Ọ na-enye anyị ego dị iche iche mgbe niile. Nhọrọ ị na-eburu n'uche mgbe niile, nke dịkwa Ugbu a ị nwere onyinye nke ụbọchị 3 na ọnụahịa nke 2 site na ịpị ebe a.
Kedu ka igwe nchọgharị n'ịntanetị si arụ ọrụ
Ma anyị na-achọ nyocha ọchụchọ nke na-atụle ọnụahịa dị n'etiti ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala dị iche iche ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ igwe nyocha maka ụlọ ọrụ ụfọdụ, ọrụ ahụ na-adị otu.
N'ime ha ka anyị nọ ga - egosiputa ihuenyo nwere igbe di iche na nhọrọ ndi anyi aghaghi ijuputa. Nke mbu, anyi aghaghi igosi ebe anyi nwere mmasi iburu ugbo ala. Mgbe e mesịrị, anyị ga-egosi ụbọchị nke nchịkọta na nnyefe nke otu. Na mmechi, anyi aghaghi akowaputa udi na njiri mara nke ugbo ala.
Ekwesiri ighota na, dabere na injin nyocha eji, a manyere anyi inye uzo ihe omuma ndi ozo. Agbanyeghị, ihe ndị a edepụtara n'elu bụ ndị na-apụta dị ka iwu izugbe na ụdị ọchụchọ, yana ike dịkarịsịrị ka akọwara.
Enwere m ike ịgbazite ụgbọ ala na-enweghị kaadị akwụmụgwọ?
Imirikiti ụlọ ọrụ na-achọkarị ịgbazite ụgbọ ala site na ịkwụ ụgwọ ego, ma na-achọ a kaadị akwụmụgwọ maka ya. Ya mere, ọ nwere ike bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozi na-agaghị ekwe omume ịnweta ụgbọ ala mgbazinye na-enweghị ụdị ọrụ a.
Ihe mere na ịjụ ego n'aka dị nnọọ mfe. Cgbọ ala dị oke ọnụ, sie ike ịchekwa yana, ọkachasị, ha na-enwe mmezi na n'ọnọdụ ụfọdụ nwere ike ị dị oke ọnụ. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ga-eji hụ na ụgbọala ndị ahụ agaghị emebi mmebi ndị ahịa kpatara, ọ bụrụ na emezughị nke a, ha ga-anwa ibelata ha anaghị ewepụ mfu akụ na ụba. N'ụzọ nke a, ha na-eke ihe mkpuchi agbakwunye na mgbazinye ụgbọ.
A na-edebe insurances a na nkwụnye ego n'ụdị ego nke onye ahịa ga-enye naanị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa (mmebi igwe, mmebi, igbu, wdg). Site na kaadị kredit ọ dị mfe ịmepụta ụdị nkwụnye ego a, "na - egbochi" ụfọdụ ego nke nguzo dịnụ nke a ga - "tọhapụrụ" na nnyefe nke ụgbọ ala ahụ.
Agbanyeghị, dịka ihe niile dị na ndụ a na-agbanwe, ọnọdụ a agaghị ebelata. Ugbua n'ọtụtụ n'ime obodo ndị ukwu enwere ụlọ ọrụ ndị dị njikere ịgbazite anyị ụgbọ ala ha site na ịkwụ ụgwọ ego. Via ịntanetị dị mgbagwoju anya karị, mana enweela ụfọdụ okwu dịka AutoEurope.
Kedu otu mgbazinye ụgbọ ala n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na-arụ ọrụ?
N'oge na-adịbeghị anya, mgbazinye ụgbọ ala agbanweela mgbanwe. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-anaghị enye ụgbọ ala ha, kama na-arụ ọrụ site n'aka ndị mmadụ n'otu n'otu. Nke ahụ bụ, ọ bụ ndị mmadụ nwere mmasị azụmaahịa ma ọ bụ nweta ụfọdụ uru ha na-enye ụgbọ ala nke ha ime ka ha diri ndi n’aru oru.
Ndị nwe ha na-ahọrọ ọnụahịa na nnweta, na mgbe ha natara arịrịọ mgbazinye, ha na-ahọrọ nke ha chere na ọ kacha adaba na-adabere na ọdịmma ha. Mgbe e mesịrị, ha na-akwado ya ma zipụ adreesị na ntuziaka maka ịnakọta ụgbọala ahụ na onye nwe ụlọ.
Hasgbọ ala mgbe nile nwere na-laghachi na tankị jupụtara na mmanụ (dịka ọ dị n'oge nnyefe), yana ọnụ, onye nwe ya na onye nwe ụlọ, lelee ọnọdụ nke ụgbọala ahụ iji hụ na enweghị mmebi na mmebi ahụ.
Atumatu nke ndi mmadu na-acho inweta ego kari.
Ikpebi ịgbazite ụgbọ ala ma ọ bụ ụdị ụgbọ ọ bụla n'oge njem anyị nwere nhọrọ dị oke mkpa iji bụrụ mkpebi anyị na-agaghị akwa ụta.
Na mbu, na mgbe anyị kpebiri ime ya, anyị nwere ike inwe puku ajụjụ na ụfọdụ obi abụọ n'uche anyị. Agbanyeghị, mgbe anyị gụchara ihe niile dị n'elu, anyị nwere olile anya na azịzawo ajụjụ ndị a niile na enweghị obi abụọ.